Mohammed VI-Mpanjakan’i Maraoka Feno 20 taona nitondrana
Nanamarika ny faha-20 taona nitondrany ny satroboninahiny ny mpanjaka Mohammed VI omaly.
I Maraoka ankehitriny no azo ambara fa firenena fitaratra ara-toekarena aty Afrika tao anatin`izay 20 taona izay. Maro ireo fotodrafitrasa naoriny tamin`ity firenena ity. Teo ihany koa ireo indostria goavana any amin`ireo toeram-panamboarana fiara sy fitaovana momba ny any anaty rano (aeronautique) ary famokarana herinaratra amin`ny alalan`ny angovo azo havaozina. Azo faritana eo amin`ny 4, 5% ny tahan’ny fitomboan`ny harinkarena faobe raha ny voafaritra. Manjaka anefa ny tsy fitoviana satria mivangongo amin`irre renivohitra ihany ireo faritra manankarena ary marefo ireo mponina lavitry ny renivohitra.